Saliida Silicone, Weelka Cake, Dheecaanka Silikon - Jingqi
Khariidadda Safarka Sicir-Weelka ee Silicone Safarka, Tuubbooyinka Safarka Silicone ee Logo Customka ah
Nashqadeynta moodada barafka cubaha FDA silikoni barafka ayaa wasakheysa caaryada jiilaalka
Ciyaaraha banaanka ee Cilmiga Cuntada ee bilaashka ah ee loo yaqaan 'BPA' Ciyaaraha Dibadda Silicone Isku laabma dhalooyinka biyaha 500ML
Qalabka Kushiinka ah ee Silicone Qalabka Saddexda Qafiif ah oo Nadiifin fudud
Qalabka Cunto karinta ee Aad u Wanaagsan, Cunnada Dheecaanka ah ee Cunnada Dheerta leh ee Cunnada lagu Daadiyo
Qalabka jikada ee 8M Silicone Qallooc ah oo Muhiim ah oo Looxado ah Miiska Cuntada
Fancy Silicone Ice Cube Moodhadhka Cunnada Fasalka 6 Cuntada loogu talagalay Cocktails
Saxannada silikoonku waxay sii daayaan barafka nadiifka ah wayna fududahay. BPA Bilaash ah, silicone cunto ah. Suxuunta Weelka amaan. Xabadahaani waxay ku darayaan kaamil cabitaan kasta. Isku day inaad samaysato baraf qaxwaha oo weligaa ha cabbin qaxwada barafka la qasibay mar labaad. Cube kasta oo Kaamil ah way fududahay in laga fujiyo saxanka.
Xirmooyinka Shukulaatada ee macaan ee jilicsan ee jilicsan ee Silicone
Malaha! Silicone kuma jiraan wax BPA ah, sidaa darteed waad ku wanaagsan tahay dhinacaas haddii aad dooratid saxanka barafka silicone inuu beddelo caag ah. In kasta oo caaggu yahay nooc ka sameysan polymer, silikone waa resin dabacsan oo lagu sameeyay silica - oo si fiican loogu yaqaanno ciid illaa celceliska xeebta junkie.
Cabbir Weyn Balaastikada Silicone Dheecaanka Ubax Ubax Lagu Sameeyay
Dhammaan silikonku waa bilaa-bilaash-BPA, sidaa daraadeed nooca noocan ahi waxay la mid tahay sumaynta sonkorta miiska inay ka madax-bannaan tahay. Sure, waa run, laakiin ma ahan sida ay u gaar tahay ama si uun uga duwan tahay xulashooyinka kale ee la midka ah sababta oo ah magacaabidaas. Balaastikada BPA-ka bilaashka ah, dhinaca kale, waa waxoogaa gaar ah.
Mouse Cartanon Qurxinta Qurxinta Silicone Oven Mitts Qalabka Jikada
Nooca Logo: 1. Beddelka Dijitaalka ah ee daabacan / Kuleylka; 2. Daabacad Xariir ah; 3. Embossed / Debossed; 4. Calaamadda iwm Calaamadaha Logo: 1. Alaabada; 2. Sanduuqa Baakadaha ku yaal; 3. Magaca Aqoonsiga / Calaamadda; 4. ama jagooyinka kale ee loobaahanyahay
maxaa noo doorta
ku soo dhowow shirkadaada
Xiamen Jingqi Rubber & Plastic Co., Ltd. waxaa laga aasaasay in ka badan 9 sano magaalada quruxda badan-Xiamen. Waxaan diirada saareynaa soo saarista alaabada silicone iyo Rubber-ka iyo aaladaha jikada silikone. Inta badan waxaa ka mid ah bacaha barafka silicone, caaryada keega, xawaashka, Cover Fresh, alaabada xayeysiinta iyo dhammaan noocyada sheyga silicone. Hadda, shirkaddeenu waxay leedahay aqoon-isweydaarsiga 1000-mitir-mitir ah oo ku yaal Guankou, Xiamen. Waxaa jira koox shaqaale ah oo khibrad iyo xirfad leh iyo tikniyoolajiyada soosaarka horumarsan iyo qalabka tijaabada ee shirkadeena, sidaa darteed awooda wax soo saarka maalin kasta waxay gaari kartaa 100,000 gogo '.